Fanta ayaa cusbooneysiineysa astaanteeda si ay ula jaan qaado dhagaystayaasha da'da yar | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Dhiirrigelinta, logos
Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee ka Boqortooyada Coca-Cola oo ay hadda cusbooneysiisay muuqaalkeedii. Fanta ayaa dib u naqshadeysay astaanteeda waxayna ku dartay bilic aad u badan oo nasteexo leh. Ujeeddadeedu waa inay ku xirnaato dhagaystayaasheeda tooska ah, dhallinyar iyo dhallinyar ka sarreeya dhammaan. Waqtigaan la joogo shirkaddu waxay kaliya siisay iftiinka cagaaran isbeddelada Talyaaniga, Poland, Serbia iyo Malta. Dabcan, waxaa lafilayaa in la isku dhafan doono laguna soo rogi doono sawirka rasmiga ah ee badeecada.
Isbedelada waxaa lagu hirgeliyay labadaba astaanta lafteeda, iyo qaabeynta dhalada ay ku jirto cabitaanka fudud. Labadaba isla istiraatiijiyad isku mid ah, waxay isku dayaan inay u soo bandhigaan firfircoonaan, firfircoonaan iyo laxan muuqaal ah halabuurka. Iyadoo ay weheliyaan goobooyin la socda ololahooda xayeysiinta, waxaan hadda helnay dhalo qaloocan. Ku dhowaad waxaa lagu jaray dhaqdhaqaaqiisa, wax na siinaya dareen weyn oo fudayd, dabacsanaan, firfircoonaan. Ugu dambeyntii, waxay na xusuusinaysaa a caafimaad, dhalinyaro iyo firfircoonaan, awood u leh inaan ku xoqo si aad noola soo xiriirto.
Maxaa ku dhacay astaantaadii?
Dhinaca kale, xalka garaafka ee la siiyay astaantiisa ayaa u muuqda mid ilaalinaya palette-keeda. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in markan, farta ugu weyn aysan buluug ku ahayn caddaanka, laakiin se maal gasho. Hadda midabka cad waxaa la dul saaray midabka buluuga ah ee mugdiga ah kan dambena wuxuu ku eg yahay xuduudaha xarfaha. Intaas waxaa sii dheer, xarfaha ka kooban magaca astaanta ayaa noqda xaruufta waa wayn ku dhowaad sida oohin caasinimo oo markale da 'yar. Qaab dhismeedka astaamaheenu wuxuu sii ahaanayaa mid aan degganayn. Waxaan sii wadnaa nasashada kala-baxa ah ee isku xigxiga xaraf kasta. Intaa waxaa dheer, qaybaha liinta waxaa lagu daraa aagga hoose. Kani waa curiyaha kaliya ee oranji ah ee maareeya iskudhafka buluuga mugdiga ah ee ku hareeraysan noocayaga.
Waxay noola muuqataa inay ahayd xulasho xikmad badan oo awood u leh inay u gudbiso aura aad u diiran oo ka dhalinyaro badan dhagaystayaasha bartilmaameedka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Fanta ayaa cusbooneysiineysa muuqaalkeeda sumadeed: Sax mise qalad?
Ma jecli waxay i xasuusineysaa kas cas
Ku jawaab María Guipa
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay :)
Jawaab Jorge Ruiz
Wadarta guusha, iyo baakaduhu waxay si buuxda u dhammaystiraan hawsha.
Waad ku mahadsan tahay isbeddelkan, waxay diiradda saaraysaa dhagaystayaasha bartilmaameedka ah iyo haddii ay iftiimiso qiimayaasheeda.
Haddii tartanku ka sii fogaado xitaa inbadan oo ka mid ah calaamaddan oo uu kaga duwan yahay inta kale.
Ku jawaab Alberto García
Waxay leedahay hawo gaar ah oo aan jeclahay oo waliba toos u toos ah. Aniga ahaan, sax.
ma xuma, waxaan u maleynayaa in feerka ay ka dhigeyso mid la yaab leh waxaanan jeclahay faahfaahinta dhoolla caddeynta A, hadda ma garanayo haddii ay lagama maarmaan tahay in lagu buuxiyo sawirro
Jawaab ku sii Cristhian Serur
Haa xirmada, maya astaanta?
Jawaab Julian Rodriguez Vokhmianin
Astaantu waxay sifiican ugu habboon tahay baakadaha, iyada oo siineysa firfircooni ka badan font wareega ah ee ay hadda haysato.
Waa Logo loo sameeyay dhalinyarada da 'yarta ah wayna ku guuleysataa.
In kasta oo kan kale ka fudud yahay, haddana kan waan jeclahay. Oo aniga waxay ila tahay inay soo jiidato fiiro gaar ah ...
Jawaab Ana Mora
Qolalka Erik dijo
Waan jeclahay, waxay leedahay taabasho duug ah laakiin waxaan u maleynayaa in liintaas ay aad u badan yihiin
Jawaab Erik Salas
Waa ii qabow.
Jawaab Gabriel Parra Rodríguez
Midig, qaybaha liinta waxay siinayaan ugubnaan. Waxaan sidoo kale jeclahay faahfaahinta dhoolla caddaynta.
Jawaab Paco Fernández
Waxaan u arkaa jeexjeexyada liinta inay qalad tahay, waxaa loo maleynayaa inay horey u aheyd oranji. Waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd iyaga la'aantood iyo in qeybta hoose ee buluuga ah "lagu daadsho" magaca. Midabada ayaa aad u muuqda.
Jawaab Judith Garay
Bandhigyada caalamiga ah dijo
Waxay leedahay hawo retro qabow, dhoolla caddeynta ugu dambeysa ee A ayaa aad uga qabow. Haddii sumaddu ka saarto oranjiga midkii ugu dambeeyay, dib uma soo celin lahayn, baakadka cusubna waa soo jiidasho bartilmaameedka loogu talagalay.
Coke Wadaadka Rábago dijo
Waxaan hayaa miro badan.
Jawaab Coque Pastor Rábago
Kan cusub ayaan ka jeclahay kii hore. Waxay leedahay taabasho gadaal ah oo aad ugu habboon.
Ku soo jawaab Beatriz Lainez
Sandra AC maxaad u malayn?
Jawaab ku qor Beatriz Agudo